ONYE MAARA IHE NA-EME IHE DỊ MMA 9.61.647 FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Onye maara ihe na-eme ihe dị mma 9.61.647
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwa ịmepụta usoro ihe omume ma ọ bụ egwuregwu ga-ejedebe na ozi njehie na faịlụ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Ọbá akwụkwọ a dị omimi bụ Microsoft Visual C ++ 2015, ọ dịkwa mkpa ka ọ bụrụ ihe kachasị mkpa n'oge a. Njehie a na-egosipụtakarị na Windows Vista - 8.1
Nchọpụta nsogbu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
Ụdị njehie ahụ na-egosi nhụsịnụ nke nsogbu na faịlụ - ya mere, ọ nwere ike mebie ma ọ bụ na-anọghị kpamkpam. Tupu ịmalite ntuziaka dị n'okpuru, anyị na-akwado ịlele usoro gị maka nje.
Ọ bụrụ na enweghi nsogbu nje, nsogbu nwere ike ịbụ na njehie na DLL ajụjụ. Ụzọ kachasị mfe bụ idozi ha n'ụzọ abụọ - ma ọ bụ site na ịwụnye Microsoft Visual C ++ 2015 ngwugwu, ma ọ bụ site na ịwụnye otu usoro melite.
Usoro 1: Tinye Microsoft Visual C ++ 2015
Oke akwukwo akwukwo a bu nkesa nke Microsoft Visual C ++ 2015, ya mere reinstalling this package can solve the problem.
Mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Ndozi".
Ọ bụrụ na arụnyere ngwugwu maka oge mbụ, ị ga-anakwere nkwekọrịta ikikere ma jiri bọtịnụ ahụ "Wụnye".
Chere maka installer iji detuo faịlụ niile dị mkpa na kọmputa gị.
Na njedebe nke nwụnye, pịa "Mechie" ma gbalịa ịgba ọsọ egwuregwu ma ọ bụ mmemme - o yikarịrị ka njehie ahụ agaghị eme ka ị gharazie iche.
Usoro 2: Wụnye Update KB2999226
Na ụfọdụ nsụgharị nke Windows (ọ bụ nsụgharị nke 7 na 8.1), Microsoft Visual C ++ 2015 anaghị arụnye ya n'ụzọ ziri ezi, ya mere a dịghị etinye akwụkwọ ọgụgụ dị mkpa. Ọ dị mma, Microsoft wepụtara ngbanye dị iche na ndepụta KB2999226.
Nbudata mmelite site na saịtị gọọmentị
Pịa njikọ dị n'elu ma pịgharịa gaa na "Usoro 2. Ebe Ntanetị Ọrụ Microsoft". Chọta na listi ndepụta nke mmelite maka Os gị ma pịa njikọ "Download ngwugwu" adagide aha ya.
Ntị! Jiri nlezianya hụ bit: mmelite maka x86 agaghị arụ ọrụ maka x64, na ntụgharị!
Họrọ asụsụ site na menu ndetu. "Russian"wee pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Gbaa nhazi ahụ ma chere ka usoro mmelite ahụ mezue.
Ịkwado melite ahụ ga-edozi nsogbu niile metụtara na api api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Anyị weere ụzọ abụọ iji dozie nsogbu na ebe obibi akwụkwọ-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.